Zimbabwe -- Institute for Security Studies, Tshwane/Pretoria - allAfrica.com
Morgan Tsvangirai inspired many in the fight for democracy in Zimbabwe. Sadly, the most immediate legacy of the late Movement for Democratic Change-Tsvangirai (MDC-T) leader is a… Read more »
Uncertainty, intrigue and fake news have characterised recent days and events in Zimbabwe. Following the confirmation of a bloodless military coup in which President Robert Mugabe… Read more »
When President Robert Mugabe and his Zimbabwe African National Union - Patriotic Front (ZANU-PF) party swept to victory in 2013, the resigned riposte of the opposition Movement for… Read more »
Youth protests against inequality - specifically for free or low-cost education - have led to successful changes in government action, particularly in South Africa. Today marks the… Read more »
8 August is Heroes' Day in Zimbabwe. The annual holiday celebrates the men and women who fought on the winning side in Zimbabwe's brutal war of independence, and is synonymous with… Read more »
On Wednesday 6 July, thousands of Zimbabweans participated in a peaceful 'stay-at-home' protest against the ruling Zimbabwean African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF).… Read more »